अण्डा कति खाने ? कसरी खाने ? - Samata Khabar
१२ माघ २०७७, सोमबार ०८:२८
काठमाडौं : अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ?
केही व्यक्तिलाई अण्डाको एलर्जी हुन्छ खासगरी ५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यस्तो समस्या हुन्छ।
अण्डाका एलर्जीका केही लक्षण :
डा.फिलिप्स भन्छन्, ‘एलर्जी नभएका व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारले अण्डा खान सक्छन्। तर अण्डा कसरी बनाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
बादी महिलालाई सिलाइकटाई तालिम
काठमाडौं उपत्यकामा एक साता लम्बियो निषेधाज्ञा
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको आज उम्मेदवारी दर्ता